MW Waare oo si kulul uga hadlay dil xalay masuul ka tirsanaa maamulkiisa loogu geystay Jowhar | Somsoon
Home WARAR MW Waare oo si kulul uga hadlay dil xalay masuul ka tirsanaa...
MW Waare oo si kulul uga hadlay dil xalay masuul ka tirsanaa maamulkiisa loogu geystay Jowhar
Madaxweynaha maamulka Hir-Shabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa war ka soo saaray weerarkii xalay lagu dilay guddoomiye ku xigeenkii amniga gobolka Shabeelaha Dhexe, Muxumad Sugaal Cismaan iyo wiil uu dhalay oo xalay u geeriyooday Bam lagu weeraray hoygii ay ka deganaaayeen magaalada Jowhar.
Waare ayaa ugu horreyn tacsi u diray shacabka Hir-Shabelle, ehelkii, qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay marxuumka.
Sidoo kale wuxuu sheegay in marxuumka uu ahaa xubin muhiim ah oo ka baxday maamulkiisa iyo shacabka Hir-Shabelle.
Waxaa kale uu faray hey’adaha ammaanka Hir-Shabelle in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u sameeyaan baaritaan dhab ah oo la xiriira weerarkaasi, sharcigana la soo taago kooxihii ka dambeeyey.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle, Dr Maxamed Cabdi Waare, oo ku hadlaya Afka Golayaasha iyo kan Shacbiga Hirshabelle ayaa ka tacsiyeeyay Geerida Allaha u naxariistee Guddoomiye ku xigeenkii amniga Gobolka Sh/Dhexe marxuum Muxumad Sugaal Cismaan iyo wiil uu dhalay oo xalay u geeriyooday Bam gacmeed lagu weeraray hoygooda Jowhar.
Article horeQM oo warbixin xasaasi ah ka soo saartay canshuurta xooga ah iyo askareynta caruurta ee Al-Shabaab
Article socoda Thabit Cabdi: “Waa laga gaabiyey fulinta ballan qaadyadii qaraxii 14-kii October”